Mooshinka ka dhanka ah baarlamanka Juba oo socda & Debadbax ka dhacay Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalnintii labaad ka doodaya mooshin ka dhan ah baarlamaan goboleedka maamulka Juba oo beelo badan ka cawdeen qaabka lagu soo xulay dadka xubnaha ka ah.
Dhowr xildhibaan ayaa shalay baarlamaanka federaalka ah horgeeyey mooshin lagu doonayo in meesha looga saarayo baarlamaanka maamulka Juba oo dadka ka horjeeda sheegaan in Axmed Madoobe uu ku shubtay dhismaha baarlamaankaas, isagoo garab ka helaya Kenya iyo Itoobiya.
Baarlamaanka Juba oo ka kooban 77 xildhibaan ayaa lagu dhawaaqay 15-kii bishii April, 2015, wuxuuna gudoomiye doortay isla bishaas.
7-dii bishaan May, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Kismaayo uga qeybgalay munaasabadda caleema sarrka, gudoomiye baarlamaanka Juba, Sheekh Cabdi Maxamed C/raxmaan.
Lama oga in mooshinkaan ay ku guuleysan doonaan xildhibaannada keenay iyo inkale, iyadoo baarlamaanka Juba yahay baarlamaan munaasabaddii caleema saarka gudoomihiisa ka qeybgalay madaxdweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhanka kale, waxaa shalay magaalada Kismaayo ka dhacay debadbax uu soo abaabulay maamulka Juba, kaasoo looga soo horjeeday mooshinka ka dhanka ah baarlamaankaas ee la hor geeyey baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.